ရန်ကုန် – Ministry of Union Government Office
ဗိုလ်တ​ထောင်မြို့နယ်၊ အမှတ် (၈) ရပ်ကွက်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း နှင့် (၄၂)လမ်းထိပ်၌ ပိုးသတ်​ဆေးဖျန်း
၂၀. ၄. ၂၀၂၀ ရက်​နေ့ ၀၈၃၀ အချိန်မှစ ၍ ဗိုလ်တ​ထောင်မြို့နယ်၊ အမှတ် (၈) ရပ်ကွက်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း နှင့် (၄၂)လမ်းထိပ်၊ တိုက်အမှတ် (၃၀၃ ) ​Case (၁၁၀) ​နေထိုင်သည့် လမ်းအတွင်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်​ရေးမှူး၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ​အုပ်ချုပ်​ရေးမှူး၊ မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်​ရေးမှူးအဖွဲ့တို့မှ ပိုးသတ်​ဆေးဖျန်းခြင်းလုပ်ငန်း ​ဆောင်ရွက်ခဲ့​ပါသည်။
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်အတွင်း ညမထွက်ရ အမိန့်ကြေညာထားရှိမှု အပေါ်လိုက်နာမှုရှိ/ မရှိ လှည့်လည် စစ်​ဆေး
၁၈.၄. ၂၀၂၀ရက်​နေ့၊ ၂၂၀၀အချိန်မှစတင်၍ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်အတွင်း ညမထွက်ရအမိန့်ကြေညာထားရှိမှုအပေါ်လိုက်နာမှုရှိ/မရှိ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဆောင်ပြီးမနရ မနမီးသတ် ရပ်ကျေးအုပ်မှူးများ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်များမှ လှည့်ကင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၁၅.၄.၂၀၂ဝ ရက်​နေ့ တွင် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်အတွင်း အခြေခံစားသောက်ကုန်များဝေငှခြင်း
တာ​မွေမြို့နယ်အတွင်းရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ​ထောက်ပံ့
(၁၄.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ ၁၆၀၀ အချိန်မှစ၍ တာမွေမြို့နယ်အတွင်းရှိ ပုဏ္ဏားကုန်း၊ အရိုးကုန်း၊ ကျောက်မြောင်းကြီး၊ ပုသိမ်ညွန့်၊ မလွှကုန်းဌေးကြွယ်က၊ နတ်ချောင်း၊ တာမွေကြီး(က+ဂ)၊ တာမွေကြီး(ခ)၊ မေတ္တာညွန့်၊ တာမွေလေး၊ မာန်အောင်ရပ်ကွက်တို့မှ အခြေခံလူတန်းစား အိမ်ထောင်စု (၉၉၁)စုအတွက် အခြေခံစားကုန်(၅)မျိုးအား ​ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတိုး၀င်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည့် ဦးလှသိန်းနှင့် ဦးသိန်းမြင့်၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်အေး နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့များမှ လိုက်လံ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
လှိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိရပ်ကွက်များတွင် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားအိမ်ထောင်စုများအား ထောက်ပံ့ပေးသည့် အခြေခံစားကုန်ပစ္စည်း ၅မျိုး ထောက်ပံ့ပေးအပ်မှု မှတ်တမ်း
လှိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိရပ်ကွက်များတွင် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားအိမ်ထောင်စုများအား ထောက်ပံ့ပေးသည့် အခြေခံစားကုန်ပစ္စည်း ၅မျိုးကို အမှတ် ၂ ၊၅၊၇၊၈၊၉၊၁၀၊၁၁၊၁၂၊၁၃၊၁၄၊၁၅၊၁၆ ရပ်ကွက်များ၌ထောက့်ပံ့ပေးအပ်မှု မှတ်တမ်း
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်အတွင်း အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား အခြေခံစားသောက်ကုန်များ အိမ်အ​ရောက် ဝေငှခြင်း မှတ်တမ်း
၁၄.၄.၂၀၂၀ရက်​နေ့၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်အတွင်း အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား အခြေခံစားသောက်ကုန်များ အိမ်အ​ရောက် ဝေငှခြင်း မှတ်တမ်း
၁၄.၄.၂၀၂၀ရက်နေ့၀၈၃၀အချိန်မှ၁၀၁၀အချိန်ထိဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ် ၅၆ရပ်ကွက်မှအိမ်ထောင်စု၁၉၃၃အားစားသောက်ကုန်ပစ္စည်း၅မျိုးဝေငှပြီးဖြစ်ပါ သည်။
ဒဂုံမြို့သစ်​တောင်ပိုင်းရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ​ဝေငှ
ဧပြီ 13, 2020
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ထောက်ပံ့ပေးအပ်မှုမှတ်တမ်း
ရန်ကုန်တိုင်း​ဒေသကြီး၊ ​တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအား စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ထောက်ပံ့ပေးအပ်မှုမှတ်တမ်း